Ady & Fifandirana · Febroary, 2015 · Global Voices teny Malagasy
Ady & Fifandirana · Febroary, 2015
Tantara mikasika ny Ady & Fifandirana tamin'ny Febroary, 2015
Hanome Valisoa (Vola) Mihoam-pampana Hoan'izay Mahafaty Ny Tompon'ny Charlie Hebdo Ilay Mpanao Lalàna Pakistaney
Azia Atsimo10 Febroary 2015
Nilaza i Haji Ghulam Ahmed Bilour fa hanome valisoa 200,000 dolara hoan'izay namono ny tompon'ny gazetiboky ary 100,000 dolara hoan'ireo mpandova ireo mpanafika ny Charlie Hebdo. Antsoin'ny sasany ho fisehosehoana mampidi-dooza ataon'ny PR izany.
Politika Manjavozavo Ao Yemen Mitohy Miaraka Amin'ny Fanambaràna “Tsy Manaraka Lalàm-panorenana” Nataon'i Al Houthi
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana10 Febroary 2015
Raha nisy nyafomanga fankalazàna ilay fanambaràna dia nisy koa fihetsiketsehana ho fanoherana izany tany an-toeran-kafa. Efa miomnana hiatrika fotoan-tsarotra iray mampihazohazo sahady i Yemen.
Japana06 Febroary 2015
"Namporisihako izy hanatanteraka ny "harakiri". Raha izaho no reniny, dia izay no nataoko — tiako raha mba lasa maherifo ny zanako lahy."
Aza Avela Hamingana Ny Fahalalahana Maneho Hevitra Ao Japana Ny Olana ISIS : Fanangonan-tsonia
Olona maherin'ny 1.000 no efa nanao sonia ilay fanambaràna ety anaty aterineto. Nandritra ilay olan'ny fakàna takalonaina vao haingana teo, niantso ny hanaovana "famehezan-tena" rehefa manakiana ny governemanta ny olona sasany tao Japana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana02 Febroary 2015
Lasa firenena iray tsy misy filoha sy governemanta i Yemen, izay faritana mazàna ho "fanjakàna tsy alehany". Sahiran-tsaina ireo Yemenita monina ao anatin'ny fireneny amin'ny fivoaran'ny raharaha henjana faramparany teo tao Yemen